teknika GRIMME - magazine "Potato System"
Tena Label Fitaovana GRIMME
Label: Fitaovana GRIMME
Dimy mandray hopper RH 24-60 Combi ho an'ny toeram-piompiana "Jacques"
Tamin'ity vanim-potoana ity, ny orinasa mpamboly ovy fanta-daza an'ny KFH "Jacques" dia niomana tanteraka amin'ny fijinjana, nampitombo ny valan-javaboary ho ivon-toerana fandraisana dimy vaovao indray mandeha ...
Ovy RUSSIA 2021. Natao ny festival ovy!
Ny folo taona voalohany tamin'ny volana aogositra dia ny fotoana anombohan'ny mpamboly ovy ao afovoan'i Rosia fiomanana amin'ny fijinjana ovy. Ireo no andro famintinana ny voalohany ...
Fambolena ovy any amin'ny Repoblikan'i Belarus
Alexander Rudnikov, Lehiben'ny Birao Solontena GRIMME ao amin'ny Repoblikan'i Belarus Manodidina ny 1,1 tapitrisa taonina ny ovy no maniry ao amin'ny sehatry ny indostrian'ny Repoblikan'i Belarus isan-taona. ...
Franz Grimme, tompon'ny vondrona orinasa GRIMME, dia mankalaza ny tsingerintaona
Franz Grimme, olom-pirenena manan-kaja ao an-tanànan'i Damme ary tompon'ny vondrona orinasa GRIMME, dia nankalaza ny faha-3 taonany tamin'ny 75 martsa tamin'ity taona ity. Nanomboka ...
Mpijinja hopper an-tsipika indroa EVO 280 - fanavaozana maoderina
Ny mpijinja bunker roa sosona EVO 280 dia natomboka voalohany tamin'ny taona 2018. Miaraka amina fitaovana telo lehibe manasaraka sy fitaovana fanaovana «undercutting» maro samihafa ...
VENTOR 4150 miaraka amin'ny defoliator sy fitaovana hafa fanampiny
Ho an'ny vanim-potoana 2021, ny mpanangona ovy VENTOR 4150 manana laharana efatra dia manana fitaovana mifantoka amin'ny fampiharana. Ho an'ny fepetra miasa miaraka amin'ny ...
Webinar: Fanomanana ovy voa ho an'ny fambolena
Tamin'ny 2 Febroary 2021, ny magazine "Potato System" dia nanao webinar natokana ho an'ny fanomanana ovy ambioka ho an'ny fambolena, raha jerena ireo toetra mampiavaka ny karazany. Fampahalalana ...
Tandremo! Tolotra manokana ho an'ny fitaovana GRIMME!
Ny zavamaniry GRIMME dia manome fihenam-bidy 10% amin'ny tsipika fitehirizana trano fitehirizam-bokatra; andiana mpamboly ovy 430 voafetra; andiana mpiorina fandriana GF 400 voafetra.
Nahazo fitaovana GRIMME Hopper miaraka amin'ny fitaovana nahazoana maimaim-poana ary fahaiza-manao mihamitombo
Nandritra ny 20 taona mahery, GRIMME dia namokatra fitaovana avo lenta sy mitahiry vokatra amin'ny fitehirizana ovy, karaoty, tongolo ary hafa ...
Ny orinasa ASA-LIFT lasa farany tao anatin'ny vondrona GRIMME Group of Company
Orinasa mpamokatra legioma Danoà ASA-LIFT niditra tamin'ny GRIMME Group ihany tamin'ny farany. Raha tsiahivina, ny taona 2013 ny Vondrona orinasa GRIMME dia nividy ...
Tany ambanivohitra dia nanangona legioma sy ovy efa maherin'ny 5 XNUMX taonina
Ao amin'ny sehatry ny fambolena any amin'ny faritr'i Vologda dia misy fomba fampidirana maika: nandritra ny roa volana lasa, dia nisy oram-be nilatsaka tao amin'ny faritra